Wada-hadallada Talibanka Iyo Maraykanka Oo Meel Fiican Maraya – somalilandtoday.com
Wada-hadallada Talibanka Iyo Maraykanka Oo Meel Fiican Maraya
(SLT-Afghanistan)-Ergayga Maraykanka u qaabilsan wadahadalka kooxda Talibanka ee Afghanistan ayaa sheegay in horumar weyn laga gaaray wadahalada lixdii maalmood ee lasoo dhaafay ka socday magaalada Doxa ee dalka Qatar.
Zalmay Khalilzad oo ah ergayga Washington u qaabilsan wadahadalka ayaa sheegay in Talibanka uu ogolaaday qodobo horudhac u ah heshiis la gaaro, arrintaasi oo uu ku sheegay inay tahay guul weyn.
Talibanka ayaa lagu soo waramayaa inay ogolaadeen mid kamid ah qodobadii ugu waaweynaa oo uu Maraykanka codsanayey kaasi oo ah in hadii ay ciidamadooda kala baxaan dalka Afghanistan aysan halkaasi dib ugu soo noqon ama saldhig u noqon kooxaha la dagaalamaya sida Al Qacida iyo Daacish.
Balse waxaa jira qodobo aan weli lagu heshiiin oo ay kamid tahay Talibanka oo codsaday in Maraykanka sheego wakhtiga uu ka baxayo dalkooda, qodobkaasi oo ay sheegeen inuu fure ama bilow u yahay heshiis walba oo ay la galaan Maraykanka, dhinaca kale Talibanka ayaa diidan in wadahadalka lagu soo daro Dowlada Afghanistaan iyo inay ku dhawaaqaan Xabad-joojin.
Xukuumada Afghanistan ayaa dhankeeda sheegaysa in heshiis kasta oo kasoo baxa kulanka Doxa uu dhaqan geli karo oo kaliya marka ay dowlada Kabul ay ansixiso.
Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa Maraykanka uga digay inuu ku deg dego inuu ciidamadiisa kala baxo Afghanistan sidii dhacday sanadkii 1989dii markii Ruushka halmar ciidamadiisa kala baxay dalkaasi, tilaabadaasi oo keentay dagaal sokeeye oo ugu danbeyntii wadada u xaaray dhismihii kooxda Talibanka.
Dowlada Maraykanka ayaa dhankeeda dooneysa inay xal u hesho dagaalka Afghanistan oo socda muddo 17 sano ah, waxaana uga baxay ciidamo iyo dhaqaale aad u badan.